Free Myanmar Android Market
Myanmar Font Installation
မြန်မာ APK များစုစည်းရာ
Copyright © 2012 Free Myanmar Android Market. Powered by Blogger.
သင်သိရှိသမျှ နည်းပညာလေးတွေကို အများသိရှိစေလို့ငှာ ဝေငှဖြန့်ဖြူးပေးခြင်းဟာ အလွန်မွန်မြတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သိထားသမျှ နည်းပညာလေးတွေ ဖြန့်ဖြူးပေးနေတဲ့ Free Myanmar Android Market မှာ post ဝင်ရောက် ရေးသားလိုတယ်ဆိုရင်တော့ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကြိုဆိုပါတယ်။
ကျေးဇူးပြု၍ freemyanmarandroidmarket@gmail.com ကို ဆက်သွယ်ပေးပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Download Mobile Guide Journal
Download TS Journal
Download USB Driver For Mobiles Here
Huawei, HTC နဲ့ Samsung အတွက် USB Driver များကို အပေါ်ကပုံလေးကို နှိပ်ပြီး ဒေါင်းပါ။
Subscribe လုပ်ခဲ့ပါက Free Myanmar Android Market မှ Post အသစ်တစ်ခုတင်တိုင်း လူကြီးမင်းထံသို့ Email ဖြင့် ပို့ပေးပါမည်။
Facebook တွင် Like ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် Free Myanmar Android Market ၏ Facebook Page မှတင်သော News Feed များအား ချက်ချင်းသိရှိနိုင်ပါသည်။
12:52 PM Root လုပ်နည်း No comments
Root လုပ်တဲ့ app တွေ အများကြီးပါ ။ ဒါပေမယ့် apk က နေ Root ပြန်လုပ်လို့ရတာတော့ ခုမှ စတွေ့ဖူးတယ် ။ ကျွန်တော် အတွေ့အကြုံ နည်းတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။ Root တဲ့ apk လေး နာမည်က Framaroot ပါ ။ Galaxy Note 8.0 လေးကို ပထမတုန်းက မြန်မာစာဖတ်လို့ရတော့ Root မလုပ်ပဲ သုံးနေတာ .. မနေ့က တချို့ apk တွေသုံးမရ - Game တွေ ခိုးမရ - နဲ့ ICS မှာ မြန်မာစာမှားနေတာလေးတွေ အမှန်ဖြစ်တဲ့ Browser တွေ့တော့ Root လုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါ ။ အဲ့တော့ Root ဖို့ရှာတယ်ပေါ့ဗျာ ။ E root နဲ့ စမ်းလိုက်သေးတယ် ။ ဒုံရင်းပါပဲ ။ မရပါဘူး ။
Remote Desktop app တွေတင်ဖူးပါတယ် ။ ရှိတာတွေလည်း အများကြီးပါပဲ ။ ဒီ ၁ ခုက Function လေးတွေ တော်တော်ကောင်းပါတယ် ။ Window - Mac - Ubuntu တွေကို Remote လှမ်းသုံးလို့ တော်တော်အဆင်ပြေတဲ့ App လေး ၁ ခုပါ ။
11:07 AM Internet Setting No comments
၁၅၀၀ ကျပ်တန် MEC Tel mobile အင်တာနက် Setting
ခက်ပါဘူး ။ မသိရင် ပြန်ကြည့်လို့အဆင်ပြေအောင် ရေးတင်ပေးလိုက်တာပါ ။
Name – နာမည် ကြိုက်ရာထည့်ပါ ။
username – card@c800.mm
Password – card
APN type – *
prompt password ပါရင် - #777 ရိုက်ထည့်ပေးပါ
10:39 AM Applications No comments
မတင်ပေးဖြစ်တာလည်း ကြာပီ ။ blog ကိုမဖွင့်ဖြစ်တာလည်းကြာပီ ။ ဒီနေ့ အသိ ၁ ယောက်က ဖုန်းခေါ်ရင်ခေါ်တဲ့ နာမည်လေး အော်ပေးတာ တောင်းလို့လိုက်ရှာရင်း တခါတည်း တခြား ဘော်ဒါတွေလိုချင်တယ်ဆိုရင်လည်း သုံးလို့ရအောင်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ Talking SMS and Caller ID ပါ ။ ဒီကောင်လေးက Ringtone ထဲကနေ Caller နာမည်ကို ခေါ်ပေးနိုင်သလို ။ Ringtone ကို Silent လုပ်ထားပီး သူ့ကြည်းလည်း အသံထွက်ခိုင်းလို့ရပါတယ် ။
10:14 AM Tower Defence No comments
Fieldrunners ဆိုကတည်းကိုက Graphic ပိုင်းပြောစရာမလိုပဲ ဆောလို့ကောင်းတဲ့ Tower Defence Game မှန်းသိမယ်ထင်ပါတယ် ။ Fieldrunners Game တွေက ပထမဆုံး IOS အတွက် အရင်ထွက်တာပါ ။ ဒီ Fieldrunners2ဟာဆိုရင်လည်း I ပစ္စည်းတွေ အတွက်ထွက်ပီးတော့မှာ April 24 မှ ထွက်လာတဲ့ Game ၁ ခုလည်းဖြစ်ပါတယ် ။ တန်ဖိုးကတော့ 2.99$ ဖြစ်ပါတယ် ။ အရင်တုန်းက Fieldrunners 1 လိုမျိုး apk File ၁ ခုတည်းနဲ့ တင်အဆင်မပြေပါဘူး ။ တန်းဆော့လို့မရဘူးပေါ့ဗျာ ။ Data File ပါလိုတယ် ။ ဒီတော့ ပိုလည်း ကောင်း ပိုလည်း လေးမယ်ဆိုတဲ့ သဘော ဖြစ်နေသလိုပါပဲ ။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် Game ကောင်းကောင်း Graphic ကောင်းကောင်းကြိုက်တဲ့ သူတွေ သဘောကျမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် ။အောက်ဘက်မှ Apk File ရော Data ဖိုင်ရော Down ဖို့ပေးထားပါတယ် ။ *apkarchive.com ကနေ ပြည်လည် Share ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် ။ အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ ။
1:34 AM Applications, Tools No comments
Clean Master ဆိုတာကတော့ History တွေ Tasks တွေ Privacy တွေ ပြီးတော့ App တွေကို Backup/Uninstall လုပ်လို့ရတဲ့ Application လေးပါ။ သူက Root လုပ်ထားသူများအတွက်
အသုံးဝင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ Widget အနေနဲ့ 1 Tab Booster ကိုလည်း သုံးလို့ရတာမို့ Task Killer မရှိလည်း ကိစ္စမရှိပါဘူး။ အဆင်ပြေပါတယ်။ ဖိုင် size ကတော့ 1.8 MB ပဲရှိပါတယ်။
1:24 AM Applications No comments
Pages Manager ဆိုတာကတော့ Facebook Page ထောင်ထားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ပါ။ အားလုံးသိတဲ့ မောင်စေတန် page က admin တွေလည်း ဒီ application လေးသုံးပြီး ပုံတွေတင်တာပေါ့။
တွေမိမယ်မလား ... via pages manager ဆိုပြီးတော့။ သူက facebook application မှာ login ဝင်ထားရင် သူ့ထဲဝင်ဖို့ password ရိုက်ဖို့မလိုတော့ပါဘူး။ ပြီးတော့ Like တွေ Message တွေ
Comment တွေကို ပြပေးတဲ့အပြင် View Inside မှာလည်း ကိုယ့် post ကို ဘယ်နှစ်ယောက် ဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ် ဘယ်နှစ်ယောက်က Like လုပ်ခဲ့တယ် ဘယ်နှစ်ယောက်က Comment ပေးသွားတယ်
Share သွားတယ် စသဖြင့်ပေါ့။ Page ထောင်ထားတဲ့သူတွေအတွက်တော့ မရှိမဖြစ်လို့ ဆိုရမှာပဲ။ ကျွန်တော်လည်း သုံးပါတယ်။
1:16 AM Applications, Educations No comments
ကျွန်တော် အရင်က သင်္ဘောလိုက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကျွန်တော်လိုက်တုန်းက အရာရှိဖြစ်ဖို့ စာကျက်မယ်ဆိုပြီး သင်္ဘောတက်တော့ စာအုပ်တွေ ယူသွားတာပေါ့။ ဝှုး ... လေးလိုက်တာ ပြောမနေနဲ့။
ကီလိုလည်း ပိုတက်တာပေါ့။ အခု သင်္ဘောသားတွေကိုတော့ ကျွန်တော့်လိုမဖြစ်ရအောင် Application လေးတစ်ခု မိတ်ဆက်ပါရစေ။ Rules of the Road တဲ့။ Navigation Rules တွေ Signal တွေ
Collision Regulations တွေ အကုန်ပါတယ်ဗျ။ စုံလည်းစုံတယ်ပေါ့ဗျာ။ Rules ကတော့ Rule5- Lookout ကစပါမယ်ဗျ။ တကယ်လည်း Rule5ကပဲ အသုံးဝင်တာပါ။ ကဲ ... သင်္ဘောသီးလောင်းတွေ
12:38 AM Applications, Personalization No comments
Slidebar ဆိုတာကတော့ .. အင်း .. Slide လုပ်လို့ရတဲ့ bar ပေါ့ဗျာ ... :P
အလှဆင်တဲ့ application တစ်မျိုးပါပဲ။ ပြီးတော့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ application တွေကို shortcut အနေနဲ့ slidebar ထဲမှာ လွယ်လွယ်ကူကူထည့်ပြီး ယူသုံးလို့ရတာပေါ့ဗျာ။ အသုံးပြုရလွယ်တယ်ဆိုတော့
ရှင်းမပြတော့ပါဘူး။ Download သာလုပ်သွားပါတော့ဗျာ။
10:07 AM Applications 1 comment
Zapya (Wifi File Transfer)
ဖုန်းထဲမှာ ဖိုင် Size ကြီးကြီးတွေ ဖြစ်တဲ့ Movie ဖိုင်လိုမျိုးတွေကို Share မယ်ဆို တော်တော် စိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ် ။ ပုံမှန် ဆို သွားပြာ လေးနဲ့ ပဲပို့တယ် ။ သွားပြာရဲ့ Transfer Rate က လည်း အားရစရာကိုမရှိပါဘူး ။ ဒါကတော့ သူ့ရဲ့ နည်းပညာ အစွမ်းကုန်ပဲကို ။ Wifi ကို သုံးမယ်ဆိုတော့ တော်တော်များများက AP တွေ လိုပြန်တယ် ။ အဲ့တော့မှ အလုပ်လုပ်တယ် ။ ဒီတော့ လိုအပ်ချက်တွေပိုများလာတယ် ။ အဲ့ဒီလိုအပ်ချက်တွေကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်တာကတော့ Zapya ပဲဖြစ်ပါတယ် ။
Zapya က Ap မလိုပါဘူး ။ 2G/3G မလိုပါဘူး ။ 3G ထက် ၁၀ ဆ မြန်ပါတယ် ။ ဘယ်ဟာကိုပဲ ပို့ပို့ အဆင်ပြေပါတယ် ။ wifi က နေချိတ်ပီးလည်း Game ဆော့နိုင်ပါတယ် ။ ဒါကတော့ သူပြောထားတာပါ ။ တကယ်လည်း ဟုတ်ပါတယ် ။ တော်တော်လေးကိုမြန်ပါတယ် ။ မြန်မှာပေါ့ Wifi ကနေ Share တာကို။ သုံးရတာ မလွယ်ရင်တောင် ခက်တော့မခက်ပါဘူး ။ သုံးရတာ အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ် ။ အောက်က သူ့ Icon လေးကိုနှိပ်ပီး ရယူနိုင်ပါတယ် ။ အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ ။
(Zapya သုံးဖို့အတွက် အသုံးပြုမယ့် ဖုန်းတိုင်းမှာ Zapya App တင်ထားရပါမယ် ။ သုံးရင် အရင်ဆုံး Connect လုပ်ရပါမယ် ။ သုံးပီးသွားရင် Menu ကနေဖြစ်ဖြစ် Exit လုပ်ဖို့လိုပါတယ် ။ ဒီတိုင်းပိတ်လိုက်မယ်ဆို Background မှာ Run နေမှာ ဖြစ်လို့ပါ)
( ဒါကတော့ သူ့ရဲ့ App ရဲ့ Function လေးတွေ ပါ ရယ်စရာလေး ရိုက်ထားပါတယ် :) )
12:07 PM Applications, Markets9comments
Download Latest Google PLAY Store 3.9.16
နောက်ဆုံးထွက် Google Play Version လေးပါ။ ကျွန်တော်တို့ဆီကနေ Google Play ကျော်ဝင်ပြီး သုံးနေကြတဲ့ သူတွေအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
>> Download Google Play Store 3.9.16 << (5.22 MB)
Sony အတွက် Myanmar Font
ဒါက Note သဘောလေးမျိုးလေးရေးထားတာပါ ။ အမှန်က Android ဖုန်းတိုင်းအတွက် အဆင်ပြေပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် Sony အတွက်က အထိကပေါ့ ... Sony အတွက် မြန်မာ ...
ဘာပဲလိုလို ... Yangon and Mandalay Directory ရှိတယ် ...
ဘာပဲလိုလိုဆိုလို့ ... ရန်ကုန်လမ်းညွှန်ဆိုတာတော့ သိပါရဲ့ ... အရင်လို စာအုပ်အထူကြီးပဲ သွားလှန်ဦး မလို့လား ... မလိုတော့ပါဘူး ... www.yango...
Android ဖုန်းတွေမှာ လုံခြုံရေးအရ သင့်ရဲ့ ဖုန်းထဲက အချက်အလက်တွေကို တခြားလူ အလွယ်တကူ ဝင်ကြည့်နိုင်ဖို့ Lock Pattern နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် Pin N...
Website လမ်းညွှန် (prepaidcard.com.mm)
ကျွန်တော်တို့ အခုလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ GSM/WCDMA/CDMA 800/CDMA 450 ဖုန်းတွေအတွက် အပြင်ထွက်ပြီး ဆိုင်မှာသွားဝယ်စရာမလိုဘဲ အိမ်ကနေ ဇိမ်နဲ့ on...
Huawei U8825D ကို Root လုပ်နည်း
အခုပြောပြပေးမှာကတော့ Huawei U8825D ကို root လုပ်နည်းဖြစ်ပါတယ်။ U8825D ဟာ အရင်က ထုတ်ခဲ့တဲ့ Huawei ဖုန်းတွေလို တိုက်ရိုက် root တန်းလုပ်လို...
ပထမဦးဆုံးတော့ Call Quality ဆိုတဲ့ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု အရည်အသွေးကို စစ်သင့်ပါတယ်။ တချို့ဖုန်းတွေက ဖုန်းကောင်းဖြစ်ပေမယ့် အသံအရည်သွေး ညံ့တယ်ဗျ။ တစ...
Sm3 Mobile Directory (Latest Version)
Sm3 Mobile Direction လေးကိုတော့ အားလုံးသိကြမှာပါ။ ဖုန်းနံပါတ်တွေ အကုန်လုံးကို တစုတစည်းတည်းနဲ့ ရှာဖွေနိုင်တဲ့ Application လေးပါ။ ခုနောက်ဆံ...
မြေတွေဝယ်မယ်။ အိမ်တွေဝယ်မယ်။ သူများ ကိုယ့်အကွက်မှာ လာကျရင် လာထား။ မြေငှားခ တောင်းမယ်။ ဒီဂိမ်းကို အရင်က ကတ်ထူပြားကြီးပေါ်မှာပဲ ဆော့ခဲ့တာ။ ...
Galaxy S Advance I9070 ကို root လုပ်နည်း
root မလုပ်ခင် SMS, Contacts, Image, Video, Music အပါအဝင် Data အကုန်လုံးကို backup လုပ်ထားပါ။ အမြစ်တူးဖို့အတွက် Rooting Package လိုပါတ...
ဖြစ်နိုင်ရင် S2 ကို လောလာဆယ် မကလိပါနဲ့ ... xda က post လေးပါ
Arcade and Action (15)
Brain and Puzzle (12)
Firmware မြှင့်နည်း (11)
Font ထည့်နည်း (4)
Musics and Videos (10)
Root လုပ်နည်း (16)
ဤနေရာတွင်ကြော်ညာထည့်သွင်းလိုပါက freemyanmarandroidmarket@gmail.com သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်
Our Facebook Page has been hacked. Please report the following page. It's not ours!
Our Policy | About Us | Admin Team | Contact Us | Live
Copyright © 2012 Free Myanmar Android Market All Rights Reserved